के गर्ने यदि तपाइँको कुनै एक एयरपोडले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन? | आईफोन समाचार
एयरपडहरू एक धेरै उपयोगी र व्यावहारिक उत्पादनहरू हुन् जुन बिग एप्पलसँग छ। र, यद्यपि हामी लाग्छौं कि यो उपकरण जस्तो छैन, यो हो, किनकि यसको अपरेशनको लागि फर्मवेयर चाहिन्छ। समस्या भेटियो जब दुबै हेडफोनले काम गर्न छाड्छ वा केवल एक हामीसँग केहि पनि स्क्रीन छैन जुन के हुन्छ भनेर हामीलाई बताउँछ। जहाँसम्म, यो उपकरणको साथ तपाईले यसलाई पेयर गर्न चाहानुहुन्छ, हामी अवस्थालाई समाधान गर्न सक्छौं जुन दुई मध्ये एक (वा दुबै) एयरपड्सले सामग्री राम्रोसँग प्ले गर्दैन। त्यसो भए म के गर्ने जब म यो अवस्थामा छु?
एयरपडहरू गलत कन्फिगर गरिएको हुन सक्छ, हाम्रो शान्त नगुमाउनुहोस्
त्यो उपकरण जुन हामीलाई १ 150० भन्दा बढी यूरो खर्च गर्यो काम गर्न रोक्दछ नर्भस ब्रेकडाउन सुरु गर्न प्रोत्साहन हुन सक्छ। यद्यपि हामीले गुणवत्ता र ग्यारेन्टी पनि खरीद्यौं, त्यसैले हामीले गर्नु पर्छ धैर्य राख्नुहोस्, त्यो पहिलो हो। एयरपडहरू ब्लुटुथ हेडफोनहरू हुन् जुन अन्तिम जोडी उपकरणमा स्वचालित रूपमा जडान हुन्छ, त्यसैले यदि यो गर्दैन वा हामी तिनीहरूलाई संगीत बजाउन सक्दैनौं भने समस्या मात्र हुन सक्दछ। एयरपडहरू वा हाम्रो फोनमा, त्यहाँ अझै छैन।
हामीले जाँच गर्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि एयरपडहरू चार्ज गरिएको छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई बक्समा राख्नेछौं र स्क्रिन खोल्न हाम्रो आईफोनमा सूचनाको साथ कुर्नेछौं। यदि दुबै हेडफोन चार्ज गरियो भने हामी कारवाही गर्नेछौं। हामी जडान फेरि परीक्षण गर्दछौं र यदि यो अझै एक वा दुबैमा सुनेन, हामी एक बाहिर लिनेछौं हेडफोनको साथ जडान रिसेट गर्दै, निम्नानुसार:
आईफोन वा आईप्याड लिनुहोस् र सेटिंग्स> ब्लुटुथ> मा जानुहोस् र "i" मा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईंको हेडफोनको नामको दायाँ देखा पर्दछ।
Ip स्किप उपकरण »मा क्लिक गर्नुहोस्
अब जब हामीले एयरपोडहरू हटाएका छौं, हामीले एयरपडहरूको केसको पछाडि बटन थिच्नुपर्नेछ केही सेकेन्डको लागि जब यो सेतो देखिन्छ। त्यस समयमा जडान स्क्रिन हाम्रो उपकरणमा देखा पर्नेछ र हामी जोडी बनाउनको लागि अगाडी बढ्छौं जुन हामीले पहिलो पटक गरेका थियौं। यसरी हामीले हाम्रो आईफोनसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गरेका छौं र, सिद्धान्तमा, समस्या समाधान गर्नुपर्दछ।
यदि समस्या अझै पनी छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं नजिकको एप्पल स्टोरमा जानुहोस् वा आधिकारिक वेबसाइटमा अवस्थित यसको समर्थन सेवा मार्फत एप्पललाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » के गर्ने यदि तपाइँको कुनै एक एयरपोडले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन?